Mayelana NATHI - KEYLASER GROUP LTD
I-Beijing KEYLASER SCI-TECH Co., Ltd. eyasungulwa ngonyaka ka-2007, umkhiqizi wedivayisi yezokwelapha emhlabeni wonke ukhiqiza imikhiqizo esezingeni eliphakeme yodokotela abahlinzayo bepulasitiki, udokotela wesikhumba, odokotela nabasebenza kwezempilo.
Ikhwalithi yisiko lethu.
I-KEYLASER ithuthukise umkhiqizo oqhubeka phambili ukuhola imakethe yomhlaba futhi imikhiqizo ithengiswa emhlabeni wonke ngamahhovisi aphesheya kwezilwandle.
I-KEYLASER ibambisana nabalingani bokusabalalisa bomhlaba wonke ukunikeza ukwaneliseka okuphezulu kwamakhasimende.
Ngomugqa womkhiqizo onokwethenjelwa ohlukahlukene kufaka phakathi i-IPL, i-E-light, i-SHR, i-Diode laser, i-Multi-channel RF, i-RF microneedle, i-CO2, i-Diode laser, ne-Q-switch laser, i-KEYLASER isebenza le mboni njengenye yezinkampani ezihola phambili ezingeni le-R & D eliqinile kanye nesipiliyoni esibalulekile.
Futhi uhambele imibukiso eminingi minyaka yonke, ukwenza umkhiqizo wethu udume emhlabeni wonke
Ithimba lethu le-R & D elinekhono lingayisebenzisa ukwenza imikhiqizo eyinkimbinkimbi futhi enobungane. I-OEM, i-ODM, umenzeli wesiteshi, umsabalalisi, noma ezinye izindlela zokubambisana. Sibe nokuhlangenwe nakho okuningi okuyimpumelelo futhi sinesifiso esinamandla sokwakha ubambiswano olusondelene lwebhizinisi nawe ukuze sizuze ngokuthuthuka kanye nokuthuthuka.
Sakha ukubukeka okusha nesoftware entsha yemishini ehlukahlukene yobuhle. Umnyango wethu we-R & D usebenza ngokubambisana nabalingani bethu bamazwe omhlaba
Inkampani yethu ikhule ngengxenye eyodwa kwezintathu.
Le nkampani ihlukaniswe ngeminyango ehlukene, ngamunye unomphathi wawo. Umnyango Wezokumaketha Nokuthengisa uqukethe iqembu lokuthengisa, nezinsizakalo zamakhasimende. Umnyango Wezokuphatha ubandakanya nabasebenzi.
Singabaholi bezimakethe emazweni amathathu futhi sandise ukusebenza kwethu emhlabeni wonke emazweni angaphezu kwe-180
Ngonyaka we-2020, Sinabasabalalisi abangaphezu koyedwa kwamanye amazwe,
Sisebenzisana namahhovisi ethu emhlabeni wonke.